ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက် - Zhejiang Lucky ထုတ်လုပ်သူ Co. , Ltd မှ
Professional ကငါး Finder ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု Pionner in China Since 2003
မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်အထူးသဖြင့်ငါး, အတိမ်အနက်နှင့်ရေအောက်ဆုံးပုံ၏တည်နေရာကိုထုတ် Finder ရန်, ရောနှောအပျော်တမ်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တံငါသည်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အံ့သြဖွယ်များနှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤငါး Finder သင်တို့ဆီသို့ငါးဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့စံပြ tool ကိုပါ!
2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Zhejiang Lucky ထုတ်လုပ်သူ Co. , Ltd မှငါးဖမ်းလယ်ပြင်၌ရှိသောအထူးပြုတဲ့ professional နဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။
R & D, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အရောင်းပေါင်းစပ်စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ခြင်း, ငါတို့တင်းကြပ်စွာထုတ်ကုန် '' အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်ကုန်အသစ်တွေဖွံ့ဖြိုးနှင့်အိမ်တွင်နှင့်ပြည်ပမှာဖောက်သည်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ် '' ငါးဖမ်းဘဝပိုကောင်း "ရှိုးပွဲစေသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ Lucky ကလူငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်အသက်တာ၌အကြီးမြတ်ဆုံးပျော်စရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းဖို့ခွငျးနေကြသည်။
1.Professional ထုတ်လုပ်သူ ကျော်ကို 10 ငါးဖမ်းလယ်ပြင်၌ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံအနှစ်များနှင့်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားအလုပ်သမားများ, တင်းကြပ် QC, နှင့်ခိုင်ခံ့သောရောင်းအားနဲ့ R & D ကိုအသင်းနှင့်အတူကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်ပေး။
2.Expert ဝန်ဆောင်မှု ပြီးပြည့်စုံသောကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, technique ကိုများနှင့်အရောင်းအသင်းနှင့်အတူကျနော်တို့ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဖောက်သည်များအတွက်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင်တို့အဘို့အစေခံရန်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
3.Innovative စိတ်ကို ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏စိတျအရာအားလုံးပြောင်းလဲနဲ့အတူကျနော်တို့ creation.New ထုတ်ကုန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းကိုရပ်တန်ဖူးဘူးစျေးကွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ဖွင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သစ်ကိုစျေးကွက်မှထိုးသွင်းနေကြသည်။
4.Competitive စျေးနှုန်း ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဖြစ်အရည်အသွေးနှင့်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူကျနော်တို့ဖောက်သည်အကျိုးကျေးဇူးအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်အများဆုံးပြည့်စုံဝန်ဆောင်မှုပေးခွငျးနေကြသည်။
2. ကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်စွာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောဆိုနိုင်သူကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုအရောင်း & after- ရောင်းချခြင်းန်ဆောင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်
ကျနော်တို့ OEM ပူဇော် 3. န်ဆောင်မှု။ ငါး Finder ကိုပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို print ထုတ်နိုင်ပါ။
4. ကျွန်တော်တို့သည်အလွန်အတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာများရှိသင်ပိုကောင်းငါး Finder ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်
အမှတ် 1966, Cuntong လမ်း, Dongxiao Subdistrict, Jindong ခရိုင် Jinhua မြို့, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်
ကံ DEVELOPMENT နှစ်အလိုက်